दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण दोस्रो चरणमा – नेपाल न्युज डट प्रेस
Home > प्रशासन > दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण दोस्रो चरणमा
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण दोस्रो चरणमा
२३ बैशाख २०७६, सोमबार २१:२७
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम जेठ १ देखि चिनियाँ टोलीले सुरु गर्ने निश्चित भएको छ।
अन्वेषणले दैलेखमा देखिएको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना आधिकारिकता पुष्टि गर्नेछ। तीन वर्षसम्म हुने अन्वेषणका लागि २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने सरकारी अनुमान छ।
यो अन्वेषणले पेट्रोलियम पदार्थकाे परिमाण यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाउनेछ।
फागुन १६ गते खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच चीनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो। यही वैशाख २९ गते नेपाल आउने उक्त टोलीले दैलेखको पादुकामा जेठ १ गते देखि काम सुरु गर्ने खानी तथा भुगर्भ विभागले जनाएको छ।
कसरी हुन्छ अन्वेषण?
खानी तथा भुगर्भ विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरेअनुसार जमिन मुनिको वनावटबारे ड्रिलिङ गरी अध्ययन हुनेछ। ड्रिलिङ गर्नको लागि पनि विशेष प्रकारको मेसिनले जमिनमा भुकम्प उत्पन्न गराउँछ। त्यसको कम्पनको आधारमा कुन स्थान उपयूक्त हुन्छ वा बढी छचल्कने स्थान कुन हो सो स्थानका ड्रिलिङको काम सुरु हुने रजौरेको भनाय छ। यसको नाम ‘फ्राइटेन्ड सर्भे’ हो।
व्यवसायिक उत्खनन्को काम कसरी अघि बढ्छ?
चीनको सहयोगमा हुने यो अन्वेषणले कति मात्रामा तेल रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क दिनेछ। अधिक मात्रामा तेल रहेको खण्डमा नेपालले उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढानेछ। त्यसको लागि सरकारले तेल कुवा उत्खननको लागि आवेदन माग गर्नेछ। सो अनुरुप आएको स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूलाइ अध्ययन गरी त्यसको जम्मा दिन सक्नेछन्।
उक्त अध्ययन गर्ने कम्पनी पनि उत्खनन् प्रक्रियामै पनि समावेश हुन सक्नेछ। उत्खनन् गर्नेसँगै व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सो कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ। अध्ययन लगत्तै सो विषयको जिम्मेवारी दिइने खानी विभागले जनाएको छ। त्यसको लागि बोलपत्र आह्वान हुने रजाैरेको भनाई छ।
अध्ययनले तेलको सम्भावना राम्रो देखाएको खण्डमा ३ वर्ष पछि नेपालले आफ्नै तेल मात्रामा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि पूर्ण रूपमा भारतसँग निर्भर छ।
हालसम्म गरेको अध्ययनकाे अवस्था कस्ताे छ?
मोरङको बाहुनी भन्ने स्थानमा २०४२ सालमा नेपाल, इटाली, स्विटजरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड मिलेर एक अध्ययन गरेका थिए। सो अध्ययनले उक्त स्थानमा पेट्रोलिम पदार्थ रहेको देखाएको थियो। त्यसै गरी दैलेखका शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुका, धुलेश्वरलगायत पञ्चकोसी क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभागले १३ वर्षअघि निस्कने ज्वालाहरु मिथेन ग्यास भएको प्रमाणित गरेको थियो।
उक्त विवरण विभागले सार्वजनिक गरेपछि २०७२ चैतमा चिनियाँ विशेषज्ञ टोली अनुसन्धानका लागि दैलेख आएको थियो। त्यतिबेला एक सातासम्म अनुसन्धान गरेर फर्केको चिनियाँ टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको हुनसक्नेबारे सकारात्मक लक्षण रहेको प्रतिवेदन दिएको छ। सोहीअनुसार दोस्रो पटक विस्तृत अन्वेषणका टोली नेपाल आउन लागेको हो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीहरू सबै संकेत अहिलेजस्तै सकारात्मक बन्दै गए नेपाली पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने दिने आउने बताउँछन्। ‘प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ। ठ्याक्कै पाइन्छ भनेर अझै भन्न सकिँदैन। यो अहिलेको अध्ययन पछि त्यो स्पष्ट हुन्छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन परियोजना प्रमुख सुधिर रजौरे भन्छन्।
नेपालमा खास गरेर पेट्रोलिम पदार्थ भएका १० वटा स्थान (ब्लकहरु) खानी विभागले तय गरेको छ। उक्त ब्लकहरुमा धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र मोरंग रहेका छन्।-नेपालखबरबाट
आज अंग्रेजी नयाँ वर्ष,नेपाल सहित विश्वभर हर्षोल्लासका साथ मनाइदै